सधै मेरो गुनगान गाउनु पर्दैन : प्रदीप खड्का - Gufgaf : Nepal ko entertainment web site : Nepali cinema & Gossip : Nepali comedy : Video & jokes : celebrity interview : Nepali art ,music , manoranjan & more
सधै मेरो गुनगान गाउनु पर्दैन : प्रदीप खड्का
२५ असोज,२०७४ | Gufgaf.com
काठमाण्डौ असोज २५ ✎ यतिबेला नायक प्रदीप खड्का नेपालकै सर्वाधिक महङ्गो कलाकारका रुपमा अगाडि आएका छन् । ‘प्रेमगीत’को प्रिक्वेल र सिक्वेल हिट भए पछि उनी चर्चाको केन्द्र विन्दुमा रहे । तर पछिल्लो समयमा सिनेमाको नाम घोषणा कार्यक्रमको प्रेसमीटमा बडिगार्ड सहित गएको विषयलाई लिएर प्रदीप विवादमा आए । त्यो विवादलाई सहज रुपमा स्विकार गरेका नायक प्रदीपको विषयमा हालै मात्र एक मिडियाले ‘प्रदीपको चुरीफूरी’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरिदियो । यसले गर्दा उनी फेरि चर्चामा आएका छन् । यस्तो समाचार आए पछि केही झस्किएका प्रदिपले समाचार फेसबुकमा शेयर गर्दै चित्त दुखाई गरेका छन् । यसै विषयमा नायक प्रदीप खड्का संग हामीले आज गफगाफ गरेका छौँ ।
सामाजिक सञ्जालमा समाचारको जवाफ दिएर फेरि चर्चामा आउनु भयो । हिजोआज समाचारहरुमा निक्कै अल्मलिने गर्नुहुन्छ हो ?
मलाई समाचारमा त्यस्तो चिज आउँदा खासै केही फरक त पर्दैन । तर, जसले पढ्नुहुन्छ र जसले मेरो समर्थन गर्नुहुन्छ उहाँहरुको लागि भने समस्या हुदोँ रहेछ । मलाई जसले माया गर्नुहुन्छ नि मैले उहाँहरुको लागि बोल्नुपर्न अवस्था आएर नै सामाजिक सञ्जालमा बोलेको हुँ ।
नभए मलाई व्यक्तिगत रुपमा यस्तो कुराले केहीपनि फरक पर्दैन । किनभने काम गर्न हो । अरुले जे भने पनि आम दर्शकले राम्रो भनेपछि मलाई पुग्छ । उहाँहरुले नराम्रो भन्दा पनि मलाई केही फरक पर्दैन । तर,जसले मलाई माया गर्नुहुन्छ नि समाचारले गर्दा उहाँहरुको अगाडि मेरो प्रतिमा नराम्रो हुन्छ । त्यो भएर मात्र म बोलेको हो ।
‘प्रेम गीत’ हिट भईसकेपछि तपाई एक पछि अर्को विवादमा किन तानिरहनु भएको छ ?
खै ! यो म आफैले बुझिरहेको छैन । हुन त यो मलाई मात्र होईन सबैलाई हुन्छ । अहिले ‘छक्का पन्जा २’ को पनि त्यस्तै छ । तर, यो टार्गेट गर्ने तरिका हो जस्तो मलाई लाग्छ ।
नेपाली कलाकार र सिनेमा प्रति नकारात्मक टिप्पणी आउँदा तपाईलाई व्यक्तिगत रुपमा कतिको चोट पर्छ ?
यसमा कस्तो हुन्छ भने यदि गल्ती गरेको छ भने अवश्य पनि स्विकार्नु पर्छ । गल्ती नगर्दा पनि कसैले आलोचना गर्यो वा आक्षेप लगायो भने चाहि एकदमै असह्य हुने रहेछ । नबिराउँनु न डराउनु भन्छन् नि ! आफूले नराम्रो हुने केही गरेको छैन तर कोहीबाट हेपिईरहेको छ भने आत्म सम्मानमा ठेस पुग्दो रहेछ ।
सहनु पनि एक किसिमको अपराध नै हो जस्तो मलाई लाग्छ । कसैले दमन गर्छ र पेल्न खोज्छ भने सहेर बस्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । गल्ती गरेको छ भने मात्र डराउने हो । मेरा बारेमा जुन शब्द चयन गरेर खबर छापिएको छ, त्यो मसँग पावर छ जुन बेला चायो म तिमीहरुलाई माथि लैजान र तल झार्न पनि सक्छु भनेर देखाएको पो हो कि ! हामीले चाह्यौ भने जे पनि गर्न सक्छौँ भनेर देखाएको जस्तो मलाई लागेको छ ।
नेपाली सिनेमा उद्योग अगाडि बढ्दै जाँदा नकारात्मक कुरा झनै किन बढिरहेको होला ?
मिडियामा बिक्नी भनेको नकारात्मक कुराहरु मात्र हो । आफ्नो स्वार्थ न हो । नकारात्मक कुरा लेख्यो भने बिक्री छिटो हुन्छ । तर, त्यो चिजले क्षणिक स्वार्थपूर्ती भए पनि नेपाली सिनेमामा कत्तिको प्रभाव पारिरहेको छ भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । गल्ति हुँदा आएको खबरदारीले हामीलाई सर्तक बनाउँछ । तर, चाहिने कुरामा आएको छ कि यत्तिकै आएको छ भन्ने कुरा पनि विचार पुर्याउनुपर्यो । म बाट गल्ती भयो भने सर्तक बनाउन लेख्नु पनि पर्छ । मेरो गुनगान मात्र गाउनुपर्छ भनेको पनि होईन । तर गल्ती नै नगरी मान्छेलाई त्यसरी यातना दिन चाहि भएन भनेको हो ।
मिडिया सम्म तपाईको चुरीफुरी बढ्यो भन्ने कुरा कसरी आईपुग्यो त ?
त्यो शब्द चयन कस्तो खालको हो ? त्यस भित्रको न्यूज के हो ? यो कुरा मैले पनि बुझ्नै सकेको छैन । मैले यसको विषयमा स्ट्याटस पनि लेखेको थिएँ । त्यो मलाई न्यूज जस्तो पनि लाग्दैन । गसिप जस्तो पनि लाग्दैन । आर्टिकल जस्तो पनि लाग्दैन । जम्मा एक हरफको मात्र छ । कसैले रिस उठेर फेसबुकमा स्ट्याटस लेखेको जस्तो छ ।
टाईटल त्यही माथि त्यस्तो खालको छ । अनि अब लेख्ने को हो ? के हो ? उसले आफ्नो नामपनि राखेको छैन त्यहाँ । नेपालको सबै भन्दा ठूलो मिडिया मानिएको कान्तिपुरले यस्तो खबर लेखेको छ ।
कसैले यस्तो ठूलो मिडियालाई स्वार्थ अनुरुप प्रयोग गरिरहेको हो कि ! मैले जे कामगर्दा पनि नकारात्मक लेखिदिने उसको भावना नै गलत हो जस्तो मलाई लाग्छ । यो लेखकले मलाई हेर्ने नजर नै खराब रहेछ जस्तो लाग्यो ।
त्यसो भए नेपाली मिडियाले अलिकति आक्रमक भएर नकारात्मक कुरालाई बढी प्राथमिकता दिदैँ गएको हो?
अलि हो की जस्तो लाग्छ । फेरि नकारात्मक कुरा छिटो बिक्छ भनेर मिडियामा यस्तो भएको होला । तर यसले कस्तो असर पारिरहेको छ भन्ने कुरा विचार गरे हुन्थ्यो ।
नेपाली सिनेमा र कलाकारको सफलतालाई सकारात्मक नजरले हेर्न सक्ने कसरी बनाउन सकिएला त ?
त्यो सानै देखि फरक पर्ने कुरा हो जस्तो मलाई लाग्छ । ऊ यदि राम्रो वातावरणमा हुर्केको छ भने उसले संसार नै राम्रो देख्छ । आफू मै खराबी भएपछि उसले सबैमा खराबी देख्छ ।
‘मिस्टर झोले’ को ट्रेलर ट्रेण्डिङ एकमा
काठमाण्डौ मंसिर २६ ■ रामबाबु गुरुङको लेखन तथा निर्देशन रहेको सिनेमा ‘मिस्टर झोले’को आधिकारिक ट्रेलर सोमबार कमल पोखरीस्थित ‘बिग मुभिज’मा..